ပရိသတ်တွေ တောင်းဆိုကြလို့ ‘စိုးစန္ဒာ’လို Style နဲ့ သီချင်းသီဆို ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ခြူးလေး
စကားပြောရင် သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခြူးလေးကတော့ ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ သဟာဝကျကျ သရုပ်ဆောင်ရင်း လူသိများလာသူလေးပါ ။ လတ်တလောမှာတော့ ခြူးလေးက ပရိသတ်တွေကြားမှာ အရမ်းအောင်မြင်သွားတဲ့ “နွေလယ်ညရဲ့ လမင်း” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက စိုးစန္ဒာပုံစံမျိုးနဲ့ သီချင်းသီဆို ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ “စိုးစန္ဒာ” ဇာတ်ရုပ်ကို ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်နိုင်လွန်းတဲ့ ခြူးလေးကို အရမ်းတော်လွန်းလို့ ချီးကျူးနေကြတာပါနော်။
ချစ်​ပရိသတ်​တွေအတွက် အရမ်းကို လှရက်လွန်းတဲ့​ ဖက်ရှင်နဲ့ ပရိသတ်တွေက်ို သီချင်းဆိုဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခြူးလေးရဲ့ပုံရိပ်​တွေကို​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​နော်​။
ခြူးလေးကတော့ “စိုးဆိုတဲ့ မိန်းမက ဘယ်တော့မှ နောင်တမရတတ်ဘူး …..လုပ်ချင်တာကို လုပ်တယ် ဖြစ်လာတော့လည်း အေးဆေးဘဲ …… ကောလင်းဘက် တစ်လျှောက် ချစ်ပရိတ်သတ်တွေ အားပေးကြမ်းချက် စိုးလို Style နဲ့ ဆိုပေးပါလို့တောင် တောင်းဆိုကြတယ် …. စိုးရေ လွမ်းနေမယ် …Character အသစ်လေး “ အေး “ ကိုလည်း အကောင်းဆုံး ကြိုးစား မယ် နော် …. ” ဆိုပြီး သူမကို အားပေးကြမ်းခဲ့ကြတဲ့ စိုးစန္ဒာပုံစံလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေကို သီချင်းဆို ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာပါ။
အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးလွန်းတဲ့ ခြူးလေးက​တော့ လတ်​တ​လောမှာ ဇာတ်ကားတွေလည်း ရိုက်​ကူးဖြစ်​နေပြီး၊ တစ်​ခြား​သော အနုပညာအလုပ်​တွေ လုပ်​ဖြစ်​နေတာပါ။ မကြာသေးခင်ကမှ ပြသပြီးသွားတဲ့ “နွေလယ်ညရဲ့လမင်း” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ စိုးစန္ဒာအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ခြူးလေးကတော့ သူမရဲ့ ပီပြင်ထိမိတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ သဘောကျခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုပိုလှလာတဲ့ ခြူးလေးကိုချစ်ရင် share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။